High School ny Toekarena - Fianarana toekarena ao Rosia
High School ny Toekarena
High School ny Toekarena Details
fanafohezan-teny : HSE
Créé : 1992
Aza adino ny ifanakalozy hevitra High School ny Toekarena
Misoratra anarana ao amin'ny High School ny Toekarena
Tsy tapaka laharana ho iray amin'ireo oniversite ambony Rosia, ny Sekoly Ambony Momba ny Toekarena dia mpitarika amin'ny Rosiana fanabeazana ary iray amin'ireo lehibe indrindra toekarena sy ara-tsosialy anjerimanontolo siansa tany amin'ny faritra atsinanan'i Eoropa sy Eurasia. Rehefa nitombo haingana ho tsara oniversite malaza fikarohana ny roapolo taona, HSE mampiavaka tena masina sy ny iraisam-pirenena sy ny fiaraha-miasa fanatrehany.
High School ny Toekarena sampam-pianarana, mpikaroka, sy mpianatra maneho ny 50 firenena, ary nanolo-tena ho ambony indrindra foana akademika fitsipika. Ny vao nolaniana fanavaozana ara-drafitra HSE manohana ny fiara mba internationalize sy ny fangadiana fikarohana ny sampam-pianarana, mpikaroka, sy ny mpianatra.
Ary mavitrika anjerimanontolo efatra campus, HSE dia mpitarika amin'ny fampianarana Rosiana natambatra fomban-drazana tsara indrindra amin'ny fampianarana sy ny fikarohana iraisam-pirenena fanao. HSE fandaharam-pampianarana manome miavaka avy amin'ny sekoly ambaratonga faharoa ny fampianarana doctorat, miaraka amin'ny sampan-draharaha ambony sy ny fikarohana ao amin'ny foibe iraisam-pirenena maromaro saha.
Sekolin'ny teorika, Toekarena
Sekoly ny Applied Toekarena
School ny Fitantanam-bola
Sekoly ny Antontanisa sy ny Data Analysis
Faculty of World Toekarena sy ny Raharaha Iraisam-pirenena
Sekoly ny World Toekarena
Sekoly ny Raharaha Iraisam-pirenena
Sekoly Fianarana ny Asian
Faculty ny Business sy ny Management
School of Business Informatika
Sekoly Ambony Momba ny Business Informatika
Iraisam-pirenena ny Training Center in Logistics
Sekoly Ambony Momba ny Project Management
Sekoly Ambony Momba ny Marketing sy Business Development
International Institute of Business Administration sy ny
Sekolin'ny Software Engineering
Sekoly ny Data Analysis sy fahaizana artifisialy
Big Data sy Information retrieval Sekoly
Faculty ny Matematika
Institute of Moscow-panjakana sy ny Matematika Electronics
Faculty ny Fifandraisana, Media and Design
Sekoly ny Media Fifandraisana
Sekoly ny Integrated Fifandraisana
Sekoly fianarana ny kolontsaina
School ny Philology
School ny Filozofia
Sekoly ny Foreign Fiteny
Faculty Siansa Sosialy
School ny bola ary
Nahazo diplaoma Urban Sekoly Fianarana sy Planning
Sekoly Ambony ny jurisprudence
GASIS Institute of Mitohy Professional Education
A.B. Soloviev Institute for Fanjakana sy ny eo an-toerana manampahaizana filana Management
Institute ny Professional Retraining
International Institute of Statistical Fanabeazana
Institute for Antontan'isa fianarana ny fahalalana sy ny Toekarena
HSE naorina tamin'ny Novambra 27, 1992, ny Yevgeny Yasin, Yaroslav Kuzminov, Revold Entov, Oleg Ananyin sy Rustem Nureev. Ireo mpanorina ireo mpahay toekarena Rosiana fanta-daza, izay nino tsena fanavaozana sy HSE dia naorina mba hanohanana ny vaovao governemanta Rosiana reformista drafitra. Avy amin'ny tena nanomboka, HSE dia afaka mandray soa avy amin'ny loharanon-karena eo ambanin'ny Eoropeana Vondrom-piarahamonina TACIS fandaharana.
HSE mikendry ny hanavao ny fampiofanana ny mpandraharaha Rosiana fiaraha-monina amin'ny toekarena. Ao amin'ny Firaisana Sovietika ny fampianarana ny toe-karena ara-politika dia anjakan'ny Marksista foto-kevitra, ary tsy afaka nihaona fenitra iraisam-pirenena. Avy amin'ny tapaky ny taona 1980 Kouzminov, Ents, Nureev sy nampiditra Ananyin amin'ny taranja matematika vaovao, toekarena sy ny antontan'isa any amin'ny mpitarika Rosiana anjerimanontolo. Taty aoriana ny sasany tamin'ireo mpianatra nanatrika ireo taranja HSE lasa mpampianatra. Na izany aza, Fanabeazana eo amin'ny toekarena Sovietika dia tsy mba nino maneho tsena fitsipika sy ny karazana fampianarana vaovao eo amin'ny siansa ara-tsosialy dia ilaina mba hahatonga ny mpahay siansa Rosiana vaovao, manam-pahefana sy ny mpandraharaha hahatakatra ny tsena Toe-karena. In 1991 miaraka amin'ny fanohanan'ny governemanta Rosiana oniversite vaovao niorina. Ankehitriny ny anjerimanontolo mitsaha-mitombo toy izany faritra toy ny matematika, filozofia, ary ny ara-politika sy ny famolavolana fanadihadiana.
In 1995 HSE no nahazo ny oniversite sata. Ao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpitarika Eoropa anjerimanontolo, toy ny Erasmus University Rotterdam, ny University Paris I Pantheon-Sorbonne, ary ny London Sekoly Toekarena sy ny siansa politika, dia nametraka ny tenany ho toy ny mpitarika oniversite any Rosia eo amin'ny sehatry ny toe-karena, siansa ara-tsosialy sy ara-politika. Ny HSE dia laharana eo an-tampon-telo malaza indrindra sy malaza anjerimanontolo any Rosia (USC – MGIMO – HSE).
In 2003 ny HSE lasa mpikambana iray tao amin'ny Fikambanana Eoropeana University (USA) ary niditra ho Institutional Management amin'ny fampianarana ambaratonga ambony (IMHE) fandaharana ny Fikambanana ho ara-toekarena ny Fiaraha-miasa sy ny Fampandrosoana (OCDE). Ny oniversite mandray anjara mavitrika ao amin'ny EUA sy ny IMHE tetikasa, mikendry ny mampitombo ny kalitaon'ny oniversite fandaharana, fikarohana sy ny fitantanana. In 2004 dia nentiny nivoaka ny Internationalization Quality Review ary nanomboka niasa tao ny hatsaran'ny Kolontsaina tambajotra amin'ny fitantanana ny fikarohana.
Dia naorina ny anjerimanontolo sy amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena hatrany ny fikarohana sy ny fanabeazana ao anatin'izany andrim-panjakana ny London School ny Toekarena, ny Erasmus University Rotterdam, DAAD ary ny maro hafa.
Ianao ve mila ifanakalozy hevitra High School ny Toekarena ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
High School ny Toekarena tamin'ny Map
Photos: High School ny Toekarena ofisialy Facebook
High School ny Toekarena hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny High School ny Toekarena.